रामोसले पीएसजीमा ४ नम्बर जर्सी लगाउने पक्का! | Hamro Khelkud
रामोसले पीएसजीमा ४ नम्बर जर्सी लगाउने पक्का!
एजेन्सी – फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले स्पेन तथा रियल म्याड्रिडका पुर्व कप्तान तथा डिफेन्डर सर्जियो रामोसलाई क्लबमा अनुबन्ध गरेको आधिकारिक रुपमा पुष्टि नगरेपनि उनी पीएसजीमा ४ नम्वरको जर्सीमा देखिने पक्का भएको छ ।
पीएसजीले बिहीबार उनलाई सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । पीएसजीले बुधबार आफ्नो अफिसियल वेभसाइटमा पीएसजीको नयाँ डिफेन्डर जो ४ नम्वर जर्सीमा देखिनेछन् भनेर पोस्ट गरेको थियो । तर लगत्तै उक्त पोस्ट हटाइएको थियो । यसको अर्थ रामोसले पीएसजीमा आफ्नो परम्परागत ४ नम्वर जर्सीमै देखिने पक्का छ ।
उनले पीएसजी टीभीसँगको अन्तरवार्तामा चार नम्वर जर्सीबाटै आफुले खेल करियर शुरु गरेको र यो जीवनभर साथ रहेको बताउँदै यही चार नम्वरमा थुप्रै उपाधि जित्न सफल भएको बताएका छन् । पीएसजीमा उनी यो सिजन अनुबन्ध हुने उनी चौथो खेलाडी हुनेछन् । पीएसजीले यसअघि जर्जिन्हो वाइनाल्डम, ड्यानिलो पेरेइरा र अचरफ हाकिमीलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
पीएसजीले रामोसलाई बुधबार राति क्लबमा भित्र्याएको र उनले चार नम्वर जर्सि लगाउने बताएको छ । रामोस र पीएसजीबीच दुई वर्षको सम्झौता भएको बुझिएको छ । यसको अर्थ स्पेनिस महारथी रियल म्याड्रिडका पुर्व डिफेन्डर उनी सन् २०२३ सम्म पीएसजीमा रहनेछ । पीएसजी जानका लागि उनले मेडिकल परिक्षण पनि सम्पन्न गरेका छन ।
रियलमा उनले दुई वर्षको सम्झौता माग गरेपनि यसमा सहमति जुट्न नसक्दा उनले सिजनको अन्त्यसँगै रियल छाडेका थिए । रामोसले रियलबाट १६ सिजन बिताउँदा ६ सय ७१ खेल खेलका थिए । जउनले रियलबाट १०१ गोल गरेका छन् । सन् २००५ मा सेभियाबाट रियल पुगेका रामोसले रियलबाट २२ भन्दा बढी उपाधि जितेका छन् । रामोसले रियलबाट ५ पटक ला लिगा र चार पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका थिए ।